Ingilazi ye-Bulding, Ingilazi emnene, Ingilazi evaliwe - Ingilazi yeJoyshing
Yantai Joyshing Glass Co., LTD. , Njengomkhiqizi okhethekile futhi oholayo nomhlinzeki wemikhiqizo ehlukahlukene yengilazi eChina, uhlose ukuhlinzeka ngesixazululo sengilazi esithuthukile sokwakha, ukuhlobisa, ukuhambisa, ukuzivikela, ezokungcebeleka nezemidlalo njalonjalo.
ingilazi enkulu kakhulu
Ngokuqanjwa okusha nokuthuthuka komkhakha wengilazi, imikhiqizo yengilazi ihlanganiswe ngokuphelele ezimpilweni zethu, ukuhlobisa emndenini ebangeni lokusebenzisa ingilazi kuya ngokuya kuvame, futhi umnyango wengilazi awugcini nje embonini yezokwakha eyaziwa njengoba uvame ukusetshenziswa ngo-deco ...
Ingilazi Yokugoba Okushisayo NGU-ADMIN NOV. 24, 2020 Ingilazi yokuhlobisa ingumkhiqizo wengilazi osetshenziselwa ukuhlobisa, iningi lawo elicutshungulwe ngokujulile, kufaka phakathi ukugcizelela, ukubanda, ukudweba, njll. IJoysh ...
Ingilazi yokuvikela ngaphezulu
Ngu-Yantai Joyshing Glass Co., Ltd ngemuva kokwakhiwa kwephrojekthi yebhuloho le-yantai HouSha Square sand cantilever, kuqede ngempumelelo, ipherimitha lengilazi le-guardrail lamamitha ayi-136, lonke ibhuloho lokuvikela lisebenzise ingilazi elicwengekile elingu-15 + 15, ingilazi eyodwa ubude be ...
Izinzuzo Of Laminated Glass
Kusho ukuhambisana nezindinganiso zikazwelonke zengilazi enamathele, ingilazi emnene nengilazi engenalutho eyenziwe ngayo. Phakathi kwalokhu, ukusebenza okuphelele kwengilazi enamathele nengilazi engenalutho eyenziwe ngengilazi enamathele yiyona ehamba phambili. Ezindlini zesimanjemanje, umphumela wokufakwa kwemisindo muhle, futhi usuyinto eyodwa ...
Ingilazi Emnene, Izinzuzo Nezinkinga Zayo, Nonke niyazi?
Ingilazi omnene uhlobo ingilazi ukuphepha. Eqinisweni, futhi luhlobo lwengilazi elicindezelwe ngaphambili. Ukuze kwandiswe amandla engilazi, izindlela zamakhemikhali noma zomzimba zivame ukusetshenziselwa ukwakha ukucindezela okucindezelayo ebusweni bengilazi. Lapho ingilazi ingaphansi kwamandla wangaphandle, i-surfa ...